Olympus Photo Recovery-3 Talaabada dib u soo ceshano Images ka Camera Olympus
> Resource > Ladnaansho > 3 Talaabada inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Olympus
Image khasaaro of camera Olympus waa dhibaato guud oo aan la kulmo laga yaabaa marka aan qaadatid sawiro. Mararka qaarkood waa ay ugu wacan tahay taxaddar la'aan, sida qalad ah la tirtiro ama formatting, halka mararka qaar ay tahay sababta oo ah arrimo aan la saadaalin karin, sida awood ka baxsan, jeermiska fayraska, ama fashilka lama filaan ah card. Ma soo kabashada sawir Olympus suurto gal ah? Sida aynu soo kaban karto sawiro ka camera Olympus?
Oo hadlaya Guud, waxaad soo kaban karto sawiro ka camera Olympus by software kabashada sawir. Ka hor inta sanamyada lumay gooba ka camera Olympus, waa in aad xusuusnaataa:
1), Ma dhigay camera Olympus ku meel ammaan ah
2), Ha qaadan sawirro cusub
3), ha gelin files dheeraad ah ama macluumaad kale ee meel ka mid ah halkaas oo sanamyada lumay ay ku kaydsan, sababta oo ah data cusub overwrite doonaa kuwa hore laga badiyay sawiro, oo waxaad ka samaysaa kabashada sawir Olympus dhib badan.
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka camera Olympus leh Olympus sawir kabashada qalab
Marka hore, ka heli Olympus software kabashada sawir halkan: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac .
Download version maxkamad free hoos ku qoran oo ku xidh on your computer.
Burcad software Olympus kabashada sawir, iyo xiriiriyaan camera Olympus in kombiyuutarka. Haddii aad images lumay ay ku kaydsan yihiin kaadhka xusuusta, u hesho akhristaha kaar iyo xerto your computer. Marka qalab lagu ogaan karaa, waxa ay ka dhex muuqan doonaa sida warqad drive ah sida (H :) hoos your computer. Kaliya 3 talaabooyinka loo baahanyahay inay ka soo kabsadaan sawiro ka camera Olympus:
Talaabada 1: Guji "Start" si ay u bilaabaan soo kabashada sawir Olympus.
Talaabada 2: Dooro kaarka si scan.
Dooro camera Olympus ama kaadhka xusuusta (halkaas oo sanamyadiinna lumay ay ku kaydsan) sida disk bartilmaameed u ah, ka dibna riix 'Scan' aad u bilowdo hawsha eegayo si toos ah.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo badbaadin files
Scan ka dib, waxaad ku eegaan karo sanamyada helay si loo hubiyo in kuwa aad badiyay jiraan. Haddii laga badiyay images Olympus waxaa lagu xaqiijiyey in la helay, waa inaad ku soo kaban karto, kadib markii barnaamijka. Markaas badbaadin sanamyada soo kabsaday in meel kale, ma aha mid meesha sanamyada lumay ahaayeen. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad soo kabsado sawiro ka H xijaab :, waa inaad sheeg gal ah si loo badbaadiyo images ee xijaab E: ama xijaab kale, ma H xijaab :.
Raac kor ku xusan ka mid ah 3 tallaabo ka mid ah, waxaad ka heli doontaa soo kabsaday sawiro ka camera Olympus ma aha sida adag tahay sidaad u malayseen.
Video tutorial ah Olympus kabashada camera sawir
Xal loo helo inuu ka soo kabsado Photos ka Canon PowerShot
Top 10 Video Downloaders u Mac OS X El Capitan
2 Talaabada inuu ka soo kabsado tirtiray ama u Khasaaray Faylal ay ka iPhone 6 Plus / 6/5 / 5S / 5C / 4s
Sidee inuu ka soo kabsado Photos / Videos ka Kingston Memory Card
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Canon EOS Mucaaradka T3i